Kurumidza Unganai Matanhatu Matanhatu Flat Pack Container Hotel-Prefab imba-NANTONG GAOYA STEEL STRUCTURE CO., LTD.
Sandwich Panel uye Simbi Sheet
Chikamu Chemagetsi （H, Ini）
NANTONG GAOYA Steel mamiriro CO., LTD.
NANTONG GAOYA YEMAHARA DZENYIKA DZOKUDZIDZA CO. Kushandisa pamasikiro,kugadzira uye kugadzwa mhando zvezvivako,uye nezvimwe dzino.
Kurumidza Unganai Matanhatu Matanhatu eFlat Pack Container Hotel
Ndeapi mabhenefiti ekushandisa flat pack pack mudziyo kuvaka hotera
Kutumira midziyo inoshandiswa kutakura zvakanaka zvinhu uye nhumbi kutenderera pasirese. Iyo yakasimba kwazvo uye yakasimba dunhu rekuvaka. Flat pack mudziyo yakashanduka kubva pakutakura mudziyo.
Iyo cuboid dhizaini yeyakati tafura pack mudziyo inopa mugadziri akasiyana siyana esarudzo munzvimbo yekugadzira, uye inogona kuve nemisanganiswa yakawanda uye shanduko. saka, chitarisiko chayo chagara chakwezva vazhinji vavaki kuti vaongorore mikana mitsva uye vanogara vachiisa kumberi mikana mitsva. Iyo yakarongedzeka pack pack mudziyo uri nyore kutakura uye inogona kuchinjika kune chero nharaunda. Inogona kusanganiswa zvinobudirira kuita mhando dzakasiyana dzenzvimbo, dzakadai seMahotera, hostels, dzimba, nezvimwewo.
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti iyo flat pack pack mudziyo Hotera yakaunza rubatsiro rwakakura kuhupenyu hwedu. Zvinogona kutaurwa kuti humwe hunyanzvi hwakawedzerwa kune indasitiri yekuvaka. Flat pack pack container Hotera yakagadzika zvakanaka muindasitiri yekuvaka uye yakafarirwa nevanhu. Iye zvino mahotera mazhinji anozogadzira yavo yega yakasarudzika flat pack mudziyo hotera. Saka ndezvipi zvakanakira rudzi urwu rwepaketi paketi yemidziyo hotera ine vanhu kuti vatevere?
Chekutanga, izvo zvinhu zvinogara zvakasimba uye hazvisi nyore kuumbika
Iyo yakarongedzwa pack pack mudziyo unoshandiswa nehotera yacho yakagadzirwa nesimbi, iyo ine kuramba kwakasimba kune dzimwe njodzi dzinongoitika dzega uye isingazoremesi. Mugadziri anogona kugadzira yakasarudzika imba zvinoenderana nemaonero ake, izvo zvinogona kukwezva vashanyi kuti vagaremo.
Chepiri, ine yakasimba yekugadzira tekinoroji
Icho chivakwa chetsika chinogona kutaridzika kuchipaza chiitiko mushure menguva refu yekushandiswa, asi iyo imba yakagadzirwa neyakagadzika pack pack mudziyo une hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji, izvo zvichaita kuti iyi mhando yeimba inotakurika iite seiri nani yekuisa chisimbiso kuita, uye hakuzovi nekudonha kwemvura munguva yekunaya.
Chetatu, kuwanda kwekushandisa kwakakwira
Iyo flat flat pack mudziyo hotera inoshandisa simbi seye chassis, uyezve inowana akasiyana siyana musanganiswa wenzvimbo zvinoenderana dhizaini yekugadzira yehotera yega yega, zvisinei kuti ndeupi saizi inogona kugadzirwa, inogona kusangana nezvinodiwa zveumwe neumwe mushandisi, uye gadzira iyo yakazara tafura yekurongedza mudziyo mudziyo hotera yekugadzirisa ichaita kuti hupenyu hwebasa huwedzere.
Chechina, kuchengetedzwa kweupfumi uye zvakatipoteredza
Iko kushandiswa kwemhando yepamusoro yemapaketi emidziyo haigone chete kupfupisa nguva yese yekuvaka asi zvakare kuchengetedza yakawanda mutengo. pakupedzisira, kana usingaishandise, iwe unogona zvakare kusunungura uye kudzokororazve, iyo ine kukosha kukuru kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwatinoita.
Gaoya ine yayo yekugadzira base uye timu yehunyanzvi yekuvaka. Isu tinonyanya kuzvipira mukusimudzira uye kuvaka kwezvivakwa zvesimbi zvivakwa uye kusimudzira uye kushandiswa kwezvinhu zvitsva zvekuvaka. Kambani timu inotora yazvino zvipfuwo uye zvekune dzimwe nyika mazano ekuvaka, zvinoenderana neyesimbi simbi dhizaini dhizaini uye yekuvaka zviyero uye inoshandisa mitsva yemadziro zvigadzirwa kugadzira yazvino dzimba dzekuvakira vatengi, uye ipa tekinoroji yakazara kwazvo uye mhinduro dzekuvaka; committed to China's green environmental protection Housing construction, kugadzira yazvino uye inonyanya kugadzikana simba-yekuchengetedza uye nharaunda-inofarira dzimba.
Easy gungano mbiri storey mugaba imba
Yakapetwa Kwakakurudzira Simbi Coil (PPGI)
Copyright © NANTONG GAOYA Steel mamiriro CO., LTD.. Tsigiro yaMeeall